N’afọ 1996, m hụrụ otu nwa agbọghọ aha ya bụ Carolina. Ihe ya masịrị m. N’ihi ya, m lụrụ ya n’afọ 1998. Mgbe anyị mụchara nwa anyị nwoke nke mbụ, ụjọ tụwara m na iwe ọkụ m na-ewe nwere ike ime ka m kpawa àgwà ka nwoke ahụ ya na mama m bi ma na-emesi ndị ezinụlọ m ike. Nke a mere ka m gaa ụlọ ọgwụ ka ndị dọkịta nyere m aka. Ha nyere m ọgwụ ma gwa m ihe ndị m ga na-eme. Ma, ihe na-ebenụ ka na-ebe. Obere ihe ka na-akpasu m iwe. Anaghị m ejiteli onwe m. Anwara m igbu onwe m otu ụbọchị ebe m na-achọ ihe m ga-eme ka m kwụsị imesi ndị ezinụlọ m ike. Ma ihe ọma meere m bụ na mbọ m gbara n’ụbọchị ahụ ka m gbuo onwe m enweghị isi. Kemgbe ọtụtụ afọ, ekweghị m na Chineke. Ma, m chọkwaranụ ikwere na Chineke. Nke a mere ka m bido ịga chọọchị. Ka nke a na-eme, Ndịàmà Jehova amalitela ịkụziri nwunye m Baịbụl. Ma, anaghị m achọ iji anya ahụ Ndịàmà Jehova. Ọtụtụ mgbe, m na-akpọ ha iyi. Ma, ebe ọ bụ na ha abụghị ndị okwu na ụka, ha na-eji olu ọma agwa m okwu, bụ́kwanụ ihe m na-atụghị anya na ha ga-eme.
mailto:?body=“Ọtụtụ Ndị Kpọburu M Asị”%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2013729%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=“Ọtụtụ Ndị Kpọburu M Asị”